Home » Zimbabwe » Herald Newspaper Zimbabwe
Herald Newspaper Zimbabwe (1980) Ltd is the oldest newspaper publisher and commercial printer in Zimbabwe, as well as being easily the largest publisher of newspapers, having dominated the industry for almost 120 years. The company is the proprietor of Zimbabwe’s leading daily newspapers, The Herald, The Chronicle and the H-Metro and owns two Sunday newspapers operating in tandem with the dailies, The Sunday Mail and The Sunday News. The largest Provincial newspaper in Zimbabwe, The Manica Post, a weekly, anchors the Mutare branch. In recent decades Zimbabwe newspapers launched two newspapers in the two main indigenous languages, Kwayedza, a Shona weekly in Harare, and Umthunywa, an Ndebele weekly in Bulawayo.
Chronicle Zimbabwe Newspaper